सपना ठुलो र कडा परिश्रम गर्नुहोस् - व्यक्तिगत विकास क्याफे
सपना ठूलो र कडा परिश्रम
पोस्ट व्यवस्थापक | सेप्टेम्बर 15, 2020 | लाइफ कोचिंगको बारेमा, जीवन कोचिंग |0|
1 सपना ठूलो र कडा परिश्रम
1.1 सपना ठूलो र कडा परिश्रम
जब कोही आफ्नो जीवन सुधार गर्न चाहन्छन्, यदि तपाइँले सोध्नुभयो भने के गर्नुहोस्? सायद तपाइँ "यसको लागि जानुहोस्", "तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्छ" वा "तपाइँको अनुसरण गर्नुहोस्" भन्दै प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ सपना"।
यदि तपाइँसँग सपना छ कि तपाइँ त्यसतिर कार्य गर्न सक्नुहुन्छ तब तपाइँसँग एक लक्ष्य छ तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ र प्राप्त गर्न योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत विकास योजनाले तपाईंलाई लक्ष्यहरू पहिचान गर्न र प्राप्त गर्न उपकरणहरू दिन सक्दछ।
तपाईले आफ्नै व्यक्तिगत विकास योजना बनाउनु भएको छ वा एक व्यक्तिगत कोशिको योजना बनाउनका लागि जीवन कोचसँग काम गर्ने, आफ्ना लक्ष्यहरू लेखेर तपाईले आफ्नो सपना पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
"सुरुमा सपनाहरू असम्भव, त्यसपछि असम्भव र अन्ततः अपरिहार्य देखिन्छन्।"
हामीले यो लेख ड्रीम बिग एन्ड वर्क कडा परिश्रम लुईसा चानले फेला पारेका छौं र सोचेका थियौं कि यो हामीले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूसँग सेयर गर्नुपर्दछ।
हामी मध्ये अधिकांशको सपना छ जुन हामी पूरा गर्न चाहन्छौं। हामी मध्ये धेरैले उनीहरूको बारेमा केहि गर्दैनौं र त्यसो गर्दा हाम्रो पूर्ण क्षमतामा पुग्नबाट रोक्नुहोस्।
सपना बिग एन्ड वर्क हार्डमा लेखकले उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न र तपाईंको सपना वास्तविकता बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
व्यक्तिगत विकास र आत्म सुधारको विषय एक विशाल क्षेत्र हो जुन यति धेरै विषयहरू समेट्न सक्दछ। त्यसकारण अधिक जानकारी हामी राम्रोसँग साझेदारी गर्न सक्दछौं र हामी विश्वास गर्छौं कि सपना ठूलो र कडा परिश्रम पक्कै पढ्न लायकको छ। हामी आशा गर्दछौं तपाईंले पनि रमाईलो गर्नुभयो।
लुइसा चान द्वारा
म मान्दै छु तपाईंसँग ठूलो सपना छन् जुन तपाईं उत्साहित हुनुहुन्छ। यद्यपि जब हामी आफैंलाई आत्म-शंका, र आत्म-सीमित विश्वासको साथ सीमित गर्दछौं, तब हामी "असम्भव" भनेर चिनाउने भूतलाई धकेल्न गाह्रो हुनेछ।
अर्कोतर्फ, यदि हामी केवल अपमानजनक सपना देख्छौं र त्यसमा कार्य गर्दैनौं भने हामी निराश हुनेछौं। हामी छिन्न इच्छा आकांक्षा र टुक्रिएको सपना हुनेछ।
हामी आज अर्को व्यायाम प्रयास गरौं।
हामी कागजको एक टुक्रा लिन्छौं र तपाईंको सपनाहरूका लागि तीन स्तम्भहरू बनाउँछौं।
सपनाहरू तल 'I Can Compolve' स्तम्भ मुनिको सूची बनाउनुहोस्। त्यसो भएपछि 'म सक्षम हुन सक्नेछु' स्तम्भमा काम गर्नुहोस् र 'मलाई थाहा छैन म कसरी पूरा गर्न सक्छु' स्तम्भमा।
(The) पहिलो स्तम्भ सजिलो हुनुपर्दछ; तपाईं अघिल्ला उपलब्धिहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र ती प्राप्तिको तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ।
(The) दोस्रो स्तम्भलाई केहि विचारहरू आवश्यक पर्दछ। त्यसो भएपछि (रातो) तपाईंको रातो मार्कर कलम, तेस्रो स्तम्भको लागि हालको शीर्षक पार गर्नुहोस् र 'मेरो सपनाहरू पूरा गर्न मैले के गर्नु पर्छ' भन्ने लेख्नुहोस्।
जब तपाईं यसलाई यसरी वाक्यांश गर्नुहुन्छ, तपाईं विकल्प दिन दिमागमा आमन्त्रित गर्दै हुनुहुन्छ। यी चुनौतीपूर्ण सपनाहरू अब सम्भव प्रयासहरू भएका छन्। तपाईको सम्भावनाको क्षेत्रबाट यसलाई बन्द गर्नुको सट्टा तपाई अब नयाँ अवसरहरू खोल्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईले जित्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको सपना प्राप्त गर्नबाट तपाईंलाई के रोकिरहेको छ? यी अवरोधहरू पार गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं तेस्रो स्तम्भको लागि आउनु भएकोमा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। तपाईं पाउनुहुनेछ जुन तपाईंले सपनाहरू असंभव सोच्नुभयो कार्यवाही चरणहरूमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र असम्भव सम्भव देखिन्छ।
तपाईंले आफ्नो कल्पना सीमित गर्न आवश्यक छैन; न त आफ्नो जोशलाई वशमा गर्नुहोस्। उच्च लक्ष्य राख्नुहोस्, र चरण towards चरण त्यो लक्ष्यतिर कदम चाल्नुहोस्। यद्यपि, लक्ष्य सेट नगर्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईं तिर कडा मेहनत गर्न इच्छुक हुनुहुन्न। अवास्तविक लक्ष्यहरूले तपाईंलाई निराश पार्दछ।
के यो थॉमस एडिसनले भने कि प्रतिभा 1% प्रेरणा हो र 99% पसीना? एक आफ्नो सपना पूरा गर्न को लागी, काम र अनुशासन हुनु पर्छ। त्यो 1% ले ठूलो सोच्नको साथ गर्छ।
त्यहाँ कुनै प्रगति छैन जब सम्म तपाई आफैंलाई तन्नु हुन्न। जीवन को सबै विकास को बारे मा छ। आफैलाई एक पटकमा चुनौती दिनुहोस्; आफ्नो सुविधा क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनुहोस्। तपाईंले गर्न सक्ने हिम्मत नगरी केहि गर्नुहोस् (नैतिक र नैतिक सीमा भित्र) र आफ्नै क्षमता महसुस गर्नुहोस्।
जब म निराश र अनिश्चित महसुस गर्छु, म केहि नयाँ सिक्न जान्छु। मलाई एक समय याद छ जब म कुनै कडा प्याचबाट पार गर्दै थिएँ। म फिर्ता लिन र अदृश्य हुन चाहेको थिएँ।
त्यसो भए मलाई डरको सामना गर्ने र मेरो क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनु भनेको उत्तम तरिका हो भनेर मैले सोचें।
मैले सधैं पानीलाई माया गर्थें र डुबुल्की मार्न चाहन्थें ताकि म कोरलहरू बीच बुन्न सकूँ र असंख्य माछाको असंख्य बीचमा पौडी गर्न सकूँ। तर कुरा यो हो कि म ब्यभिचारिक र दृष्टिगत छु; म मेरो चश्मा बिना मुश्किल देख्न सक्छ।
र म जाडोबाट डराएको छु। म हरेक बिहान १ times पटक आच्छेदन गर्छु। र यदि मैले सिड्नी छोड्नु अघि डुबकी सिक्न सिकें भने, मैले हिउँदमा यो गर्नु पर्छ किनकि मेरो प्रोजेक्ट समाप्त हुँदैछ।
तपाईलाई बाँकी कथा थाहा छ। मैले कक्षामा साइन अप गरें, प्रशिक्षणको लागि गएँ र डुबुल्कीमा प्रमाणित भए। यो लक्ष्यका लागि काम गर्न सक्षम हुनको लागि यो अत्यन्त सशक्त थियो।
एक पटक म मानसिक लडाई मा पुगेपछि, म पूल सत्रहरु र अगाडि बिहान समुद्रमा बाहिर जाँदै थिएँ। यो यस्तो अद्भुत अनुभव थियो।
एक विस्फोटन बाहेक म मेरो निराधार डर बढाए र एक फरक मान्छे बन्न। र आश्चर्यजनक रूपमा कि शक्ति र विश्वास मेरो जीवनको अन्य क्षेत्रमा अनुवाद गर्दछ।
जब तपाईं एउटा सपना प्राप्त गर्नुहुन्छ यसले तपाईंको अन्य सपनाहरू बढि निश्चितताका साथ अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ। त्यसोभए ठूलो सपना हेर्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् कि तपाईंलाई कुन सीप सिक्नु आवश्यक छ, कुन नयाँ ज्ञान तपाईंले आफ्नो सपनातिर काम गर्न हासिल गर्न आवश्यक छ। तपाईंको अर्को चरण के हो? त्यसो भए यो मात्र गर्नुहोस्! तपाई र तपाईको सपनाको बीचमा त्यहि चीज उभिरहेको छ।
र यदि तपाईंलाई तपाईंको सपनाहरू म्यापि .्ग गर्न र तपाईंको “चरणहरू” कसरी अलि मद्दत चाहिन्छ भने, केवल एक मानार्थ रणनीति सत्रको लागि साइन अप गर्नुहोस् र हामी तपाईंको सपनाहरू प्राप्त गर्न काम गर्न सुरु गर्न सक्छौं।
ड्रीम बिग एन्ड वर्क हार्डका लेखक लुईसा चान एक प्रमाणित प्रोफेशनल कोच हुन् जसले तपाईको साथ सशक्त बनाएर तपाईको सफलताको सह-सृजना गर्न काम गर्नेछन् र तपाईको लुकेका सम्भाव्यताहरू बाहिर ल्याउने छन्।
“ठूला ठूला चीजहरू गर्नका लागि हामीले कार्य मात्र गर्नुपर्दैन, सपना पनि देख्नुपर्दछ। योजना मात्र नभई विश्वास पनि गर्नुहोस्। ”
यदि सपना ठूलो र कडा परिश्रमले तपाईंलाई जीवन परिवर्तन गर्न प्रेरणा दिन्छ भने हाम्रो बिग ग्रोथ प्लानरको लागि तपाईंको कम्फर्ट क्षेत्र छोड्दै तपाइँलाई सफलताको लागि अर्को चरणहरू लिन मद्दतको लागि प्रयोग गर्नको लागि आदर्श उपकरण हुन सक्छ।
हामी सबै हाम्रो जीवनको बिभिन्न चरणमा हुन्छौं र कहिलेकाँही हामीलाई सपना बिग र वर्क हार्डमा सम्बोधन गरिएका मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न क्रममा ती सपनाहरू साकार पार्न हामी ती परिवर्तनहरू गर्न तयार हुनु आवश्यक छ।
सायद तपाईलाई जीवन कोचको सेवा प्रयोग गर्न प्रेरित गरिएको छ? को NLP लाइफ कोच निर्देशिका तपाईको क्षेत्रमा व्यक्तिगत कोच, सम्बन्ध कोच र NLP व्यवसायीहरू सूचीबद्ध गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय। धेरै प्रस्ताव टेलिफोन, जूम, स्काइप र अनलाइन सेवा तपाईं जहाँ तपाईं अवस्थित छन् पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
जीवन कोचिंग अरूलाई मद्दतको बारेमा छ। यदि तपाईंसँग कुनै जीवन कोचिंग सल्लाह छ भने, सुझावहरू तपाईं अरूहरूसँग साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ, प्रश्नहरू जुन तपाईं उत्तर दिन चाहनुहुन्छ, उपयोगी लेख वा टिप्पणीहरू जुन अरूलाई सहयोगी हुनेछ - केवल तल उत्तर दिनुहोस्।
पछिल्लोEasy सजिलो तरीका लगातार सिक्नेको आदत सिर्जना गर्ने
अर्कोन्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कसरी प्रयोग हुन्छ?
जुन 1, 2012
जीवन कोचिंग को सिद्धान्तहरु
कोचिंग एक नेतृत्व कौशल हो